Ferguson ka dib: ma taqaana 5tii saxiix ee ugu fiicnaa Manchester united ay sameesey? – Gooldhalin
Ferguson ka dib: ma taqaana 5tii saxiix ee ugu fiicnaa Manchester united ay sameesey?
Manchester United ayaa lacag kaash ah suuqa galisey shantii xilli ciyaareed ee u danbeysay. Hase yeeshee, kharashka ayaase la iska weydiin karaa waxyaabo badan, sababtoo ah Sir Alex Ferguson isagoo aanan qarashaadkaas gelin ayuu kooxda koobab badan u qaadey.
Muddo shan sano ah, seddex maamule oo kala duwan ayaa kooxda qabtay. Ciyaartoy dhowr ah ayaa ku soo biiray kooxda kuwana waa ay ka tageen.
Hadaba halkaan aan ku eegno 5ta ciyaaryahan ee ugu fiican ee Man united la soo wareegtay Ferguson kadib.
Xaqiiqda ah in Manchester United ay £ 40 milyan ku bixisay 29 jirkaan, Nemanja Matic ayaa hoosta ka xariiqday muhiimada ciyaaryahanka.
United ayaa haatan heysata rikoorka daafaca ugu fiican horyaalka islamarkaana Matic ayaa keydka u ahaa.
Red Devils ayaa u baahneyd inay bedel u sameyso Michael Carrick isla markiiba 2017, Matic ayaana shaqada qabtay.
#2 Eric Bailly
Eric Bailly ayaa yimid garoonka Old Trafford iyadoo Jose Mourinho uu xilka kooxda la wareegey waxaana uu noqdey saxiixii ugu horeeyay ee uu tababaraha United sameeyey sannadka 2016-ka. Waxaana uu dabooley baahida kooxda ee xagga daafaca.
Red Devils ayaana xidiga ku soo qadatay aduun lacageed gaaraya £ 30milyan.
Romelu Lukaku ayaa United ku yimid heshiis 75 milyan ginni oo uu uga soo wareegay Everton iyadoo Wayne Rooney oo ku laabanayo Merseyside ka dib markii uu qandaraaska u cusbooneysiiyay. Ciyaarayahanka ayaana loo keeney kooxda inuu buuxiyo booska Zlatan Ibrahimovic ee kooxda.
Wuxuu 7 gool dhaliyay todobadii kulan ee ugu horeysay xilli ciyaareedkan. Waxaana durbaba ay taagerayaasha aaminen inay heleen xidigii buuxin lahaa booska No. 9.
Ciyaaryahanka ugu weyn ee reer Belgium ayaa mudoyinkii ugu dambesey waxaa soo wajahdey abaar xagga goolasha ah isagoo dhaliyey 1 gool 11kii kulan ee ugu dambesey ee uu u ciyaarey kooxda man united.
Lukaku ayaa kooxda Manchester united u dhaliyey 27 gool tartamada oo dhan xiliciyaareedkaan.
Mata Waxa uu ku biiray Manchester United bishii Janaayo ee xilli ciyaareedkii 2013/14 isagoo ka yimid kooxda Chelsea. Tani waxa ay aheyd natiijada kaliya ee ay keentay in la aamino David Moyes.
United ayaa xidiga kula soo wareegtay £ 37 million waxaana uu sameeyey bandhigyo cakiib ah.
30 jirkaan ayaa Waxa uu dhaliyay 32 gool 132 kulan oo uu u saftay Red Devils waxaa uu sidoo kale sameeyey 50 caawin.
Xiddiga reer Spain ayaa bartilmaameed muddo dheer ah u ahaa kooxo waaweyn ka hor inta uusan ku biirin Red Devils sannadkii 2014.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Jose Mourinho. Wuxuu ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sannadka ugu fiican Man united 2016.
Herrera ayaa united u saftay 36 kulan tartamada oo dhan,inkastoo waqtigiisa ugu badan uu ku qaatay kursiga keydka.
Previous Previous post: Layaab: Ma ogtahay Xidigo waaweyn oo lagu kala iibsadey in ka yar £10m taariikhda Premier league?
Next Next post: Xulka Kubadda Gacanta Soomaaliya 20-jirada iyo 18-jirada oo ka qayb galaya ciyaaraha Bariga iyo Bartamaha Afrika, ogoow Groupka ay ku jiraan iyo xilliga ay ciyaari doonaan+Sawirro